एलईडी टर्च, एलईडी क्याम्पिंग लाइट, एलईडी हेडलम्प थोक - Liveolight.com
एलईडी क्याम्पिङ लाइट
गिफ्ट र प्रमोशन लाइट
ब्लुटुथ स्पीकर लालटेन
अविश्वसनीय 130 लुमेनस 2AAA बैटरियों पेंसिलिप संग टर्च
अधिकतम उत्पादन माथि2लुमेनहरूको साथमा एक क्रेडी XP-E2 R130 एलईडी प्रयोग गर्दछ। 2AA द्वारा alkaline ब्याट्री द्वारा संचालित,3...
2xCR123A IPX7 500 लुमेनहरू चुम्बकीय रूपमा नियन्त्रित टर्चलाइट
♥ म्यागनेटिक नियन्त्रित स्विचले तपाईँलाई6मोडहरू परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउँछ। ♥ एक क्रेडी XM-L2 U2 एलईडी प्रयोग गर्दछ, ...
मिनी एल्युमिनियम 1AAA ब्याट्री जुम टचलाइटसँग कुञ्जीचेन
♥ केवल एक हातबाट फोकस गर्न डिकोकिंगबाट जूम गर्न टाउको खिच्नुहोस्। ♥ एक क्री एमई एलईडी को उपयोग गर्दछ, ...
1000 लुमेनस 9xAA ब्याट्री क्री एलईडी ट्राफिक एलईडी
♥ फोकस गर्न डिकोकिंगबाट जूम गर्न टाउको घुमाउनुहोस्। ♥ ले अधिकतम उत्पादनको साथ एक क्री XM-L2 T6 एलईडी प्रयोग गर्दछ ...
IPX8 पनरोक 4AA ब्याट्री क्री एलईडी 10m डाइविंग टर्च
♥ IPX8 पनरोक भनेको तपाईं टर्चलाइटसँग 10 मिटरको गहिराईमा डुबाउन सक्नुहुनेछ। ♥ ले एक क्री प्रयोग गर्दछ ...
एल्युमिनियम 2AA ब्याट्री क्री एलईडी प्रोजेक्टर टर्चलाइटसँग पेंसिलिप
♥ प्रोजेक्ट प्रोमोशनल टर्चलाइट, अनुकूलन योग्य पैटर्नका साथ। ♥ 2xAA alkaline ब्याट्रीद्वारा संचालित,7घण्टा रनटाइमको साथ। ♥ उच्च तीव्रता ...
हामीलाई मूल्य सूची, भिडियोहरू, छविहरू आदिको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्, कृपया हामीलाई हामीलाई थाहा दिनुहोस्। हामी तपाईंलाई 12 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं
STARLITE एक ह्यान्ड्स-ऑन लाइटिंग कम्पनी हो, जुन हामी जनवरी 2009 मा स्थापित छौँ। हामी गरेर गरेर सुधार गर्न सिकौं। त्यसोभए हामी किन हाम्रो ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु को बारे मा सोच नहीं रोकन। हामी प्रकाश उपकरणहरू विभिन्न तरिकामा गर्दैछौँ। हामी वास्तविक प्रयोग को आवश्यकताहरु को द्वारा उत्पादन मा सुधार र सुधार को ध्यान दिछन। हामी प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवलाई ध्यान पुर्याउँछौं र अग्निफाइटर्स, सिक्योरिटीहरू, शिकारीहरू, मछुआरेहरू, आउटडोर प्रेमीहरू, खेलकुद उत्साहीहरू, क्याम्पिङ र बगैचा सम्बन्धको लागि महसुस गर्छन्। हामी सबै वास्तविक विश्व अनुभवको बारे जान्दछौं जुन नयाँ विचारहरू लाग्दछ ...
उत्तम शक्तिशाली टर्चलाइट SFL-A176N हो
फ्लाइटलाइट स्पेसिफिकेशन (एक्सएनएक्सएक्स)
किन सबैले टर्चलाइट लिनु पर्छ?
किन हेडलम्प किन?
सामरिक टर्च र यसको नेतृत्व
तपाईंलाई आवश्यक हुँदा सबै भन्दा राम्रो टर्च बन्छ
आक्रामक सुरक्षा मूल्याङ्कन
300 lumens3मोड्स कार चार्जेड flashlights rechargable लोकप्रिय
त्वरित विवरण प्रकार: फ्लैशलाइट प्रकाश स्रोत: एलईडी एलईडी लाइट स्रोत: क्री XP-G2 R5 * 1 टर्चलाइट प्रकार: Rechargeable टर्चलाइट उत्पत्ति को प्लेस: Zhejiang, चीन (मुख्यभूमि) ब्रान्ड नाम: नेतृत्व फ्लैशलाइट्स rechargable लोकप्रिय मोडेल संख्या: एसएफएल-1658 फ्लैश flashlights पुनर्जन्च लोकप्रिय ब्याट्री प्रकार: 16340 ली-आयन 600mAh प्रयोग: आपातकालीन पावर स्रोत: रिचार्जेबल बैटरी प्रकाश अवधि (h): ...
1500 लुमेनहरूले पेशेवर र उच्च शक्ति लाइट ट्राफिकको नेतृत्व गरे
त्वरित विवरण उत्पत्ति को प्लेस: Zhejiang, चीन (मुख्यभूमि) ब्रान्ड लाइट टर्चलाइट को नेतृत्व गरे मोडेल संख्या: एसएफएल-एक्क्सएनएनएनएन पावर लाइट टर्च लाइट को नाम: पावर लाइट टर्च लाइट बैटरी प्रकार: 176 * डी आउटपुट पावर: 3W रंग Temp: 13.5K चमकदार तीव्रता: 6400% -100lm 1500% -50lm 700% -25lm फ्लैश-350lm SOS-1500lm बीम दूरी: 1500% -100m 370% -50m 244% -25M असर प्रतिरोध: ...
अधिकतम उत्पादन माथि2लुमेनहरूको साथमा एक क्रेडी XP-E2 R130 एलईडी प्रयोग गर्दछ। 2xAAA alkaline ब्याट्रीद्वारा संचालित,3घण्टा रनटाइमको साथ।6फरक रंगहरूमा उपलब्ध छ र तपाईं आफ्नो मनपर्ने रङ अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ। उच्च तीव्रता पेंसिल, लोहा बनाइयो र इलेक्ट्रोफोरिक प्रोसेसिंग, तपाईसँग हो। अविश्वसनीय 130 ...
2009 मा स्थापित, STARLITE FLASHLIGHT लिमिटेड एक निर्माता र व्यापारिक अनुसन्धान, विकास र पोर्टेबल प्रकाश को उत्पादन मा विशेष व्यापारी हो। हाम्रो सबै उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मानदण्डको अनुपालन गर्छन् र विश्वभरि विभिन्न किसिमका विविध किसिमको सराहना गरिन्छ।
सूट 1, भवन संख्या .9, नम्बर 215 Yaohua Rd, Pudong, शाङ्घाई, चीन
2009 ® STARLITE। सबै अधिकार सुरक्षित।